फेसबुकबाटै लाखौँ ठगी : तीन जना पक्राउ, छ फरार | चितवन पोष्ट दैनिक
फेसबुकबाटै लाखौँ ठगी : तीन जना पक्राउ, छ फरार
भरतपुर । मोरङकी ३८ वर्षीया विष्णुकमारी राईले फेसबुक खेलाउन थालेको धेरै भएको छैन । यसैक्रममा एकदिन ‘चाङवाङ’ नाम गरेको विदेशी नागरिकले उनलाई साथी बनाउन आग्रह गरे । साथी बने । गफगाफ पनि हुन थाल्यो । गृहिणीको रुपमा दिनचर्या बिताइरहेकी राईलाई कुराकानीकै क्रममा ती व्यक्तिले महँगो सामानका फोटाहरु पठाउन थाले । कुन मन पर्छ रोज्न पनि भने ।
महँगो भए पनि हेर्दा निकै आकर्षक सामान थियो, जसलाई चाङवाङले ८ सय डलर पर्ने बताए । मन परेपछि राईले ती वस्तु मगाइन् । रोजेको वस्तु आउने भयो, तर पैसा कसरी विदेश पठाउने ! तिनै विदेशी नागरिकले आइएमई, प्रभु मनी, सिटी एक्सप्रेसको प्रयोग गर्न सुझाए ।
बहुमूल्य चीज हात पर्ने भयो, तर पैसा हालिदिन राईलाई मेलोमेसो भएन । उनले भरतपुर–१२ मा बस्ने आफ्नो भतिजा पर्नेलाई अनुरोध गरिन् । कुमाल थरका ती व्यक्तिले ३ पटक गरेर पोखरा बसपार्क र मालपोत चोकको मनी ट्रान्सफरबाट प्रेम रानामगरको नाममा पैसा पठाए । पटकपटक गरेर २ लाख ७५ हजार पठाए ।
साउन ९ गते पैसा पठाइएको थियो । त्यति पैसा पठाउँदा पनि सामान हात परेन । ती विदेशीले सामान नेपालको भन्सार कटाउन १५ सय डलर लाग्ने बताए । त्यसपछि उनी झस्किन् । आफूलाई कसैले ठगिरहेको त छैन ? भन्ने उनको मनमा प¥यो ।
इटाली, फ्रान्सबाट भारत हुँदै नेपाल सामान पठाउन पर्ने भनी आरोपितहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर प्रयोग गरी ठगी गरेको प्रहरीले फेला पारेको छ । ठगी आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीले खैरहनी नगरपालिकाबाट नेपालमा पैसा बुझ्ने गरेका प्रेमबहादुर रानालाई पक्राउ ग¥यो । उनको असली नाम राजकुमार रानामगर रहेछ । स्थायी घर तनहुँ भीमाद–५ भएका उनी दाजु सोमराज मगरसँग मिलेर खैरहनीमा यस्तै ठगी धन्दा चलाउन थालेका रहेछन् । ठगी गरेको भन्दै साउन २८ गते उनीहरुविरूद्ध खैरहनी इप्रकामा जाहेरी प¥यो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार नक्कली सवारी लाइसेन्स, नागरिकता खडा गरेर आरोपितहरुले ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ । अर्की एक महिलाले पनि दुई लाख बढी ठगी गरेको भनेपछि दुई जना जाहेरवालाबाट लगभग ५ लाखको ठगी भएको भनी उजुरी परे पनि प्रहरीले कारोबारको सिलसिला हेर्दा ४० लाखसम्मको ठगी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।
‘सोझासाझा नेपालीलाई महँगो सामानमा लोभ्याएर किन्न लगाउने र बीचमा अनेकथरी मान्छेहरु प्रयोग भई पैसा लिने, सामान यहाँ आइपुग्यो भन्ने, सामान भन्सारमा अड्कियो भन्ने, फेरि पैसा माग्ने गरेको भेटिन्छ’, एक प्रहरीले भने ।
९ जनाको समूह
अनलाइन ठगीमा ९ जनाको समूह रहेको पाइएको छ । रानामगर दाजुभाइ, सन्जना पाठक, श्याम पाठकलगायतलाई आरोपित बनाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । नवलपरासी, स्याङ्जा, पाल्पाका मानिसहरु यस समूहमा छन् । हाल ३ जना खैरहनी प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीहरु रानामगर दाजुभाइ र श्याम पाठक हुन् । २ जना भारतमै रहेको बुझिएको छ । लकडाउनका कारण बैंकहरु बन्द भएकाले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई गाह्रो भएको छ । प्रहरीले आरोपितहरु फरार हुन सक्छन् भनी यस घटनालाई सार्वजनिक गरेको छैन ।